Isixeko somculo Igumbi eliphindwe kabini Isiqithi esihle Umculo Isixeko esiyiFormosa Night - I-Airbnb
Isixeko somculo Igumbi eliphindwe kabini Isiqithi esihle Umculo Isixeko esiyiFormosa Night
Xinxing District, Kaohsiung City, I-Taiwan
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMusic
Sisekwindawo exakekileyo yesithili seshishini laseLos Angeles, ezantsi ukusuka kwilifti yiMarike Yokubuka Ebusuku
Kukwakho namayeza aseJapan, iWatsons, iCosmed, nezinye iivenkile zezipho ezikufutshane. Akunyanzelekanga ukuba uye kude ukuze uthenge izipho.
Ilifti imalunga nemizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwiFormosa Bart, ekuphela kwesikhululo sezithuthi eziphindwe kabini. Enoba kukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya, Isikhululo sikaloliwe i-Zuoying High Speed, Isikhululo sebhasi i-Kaohsiung okanye Isikhululo sikaloliwe sase-Kaohsiung, ungathatha i-MRT ngqo kwindawo yokuhlala.
Isikhululo seFormosa Bart naso silula kakhulu, kunye nokufikelela ngqo kwiindawo ezahlukeneyo ezidumileyo eKaohsiung ngaphandle kokudlulisela kwimigca eyahlukeneyo ye-metro.
Indawo yokuhlala ikumgangatho ophakamileyo wesakhiwo obonwa kakuhle, indlu isandul 'ukulungiswa, zonke iintlobo zamagumbi zine-WiFi yasendlini yasimahla, indawo yethu yokuhlala inezixhobo zokujonga kunye nezinto zokulwa umlilo kwindawo esetyenziswa ngumntu wonke, ngoko indawo yokuhlala ikhuselekile kakhulu.
Emva kokuba ubhukishile, uza kufumana inkcazelo eneenkcukacha zokubhalisa xa ufika kuthi, ukuze ukhethe elona xesha lifanelekileyo lokubhalisa xa ufika ungakhange uchithe ixesha nombuki zindwendwe wakho.
* Olu hambo lwezoshishino alulohlobo lwegumbi
* Ngexesha lobhubhane, nceda uqinisekise ipolisi yokubuka iindwendwe ngolu hambo lwezoshishino ngaphambi kokubhukisha, ukuze ungachaphazeli ukuhlala kwakho.
* Abahambi abangaphantsi kweminyaka eyi-20 abavumelekanga ukuhlala bodwa kolu hambo lwezoshishino ngaphandle komntu ophetheyo.
Ukugcinwa kweempahla kuyafumaneka kule ndawo yokuhlala, kwaye kukho indawo yokutshixa imithwalo kwigumbi lokugcina iimpahla, ukuze iindwendwe zibeke iphasiwedi yazo zize ziyithathe zodwa
Ungatshayi, nceda ungangxoli kakhulu, uphazamise ezinye iindwendwe, iindwendwe kufuneka zigcine igumbi licocekile xa ziphuma
- Ixesha lokuphuma ngu-11: 00 kusasa
Nceda uphume ngaphambi kuka-11a.m.
- Nceda ugcine ilizwi lakho liphantsi emva ko-10pm
Nceda unciphise ilizwi lakho namanyathelo emva ko-10PM.
請保持環境衛生Nceda ugcine indalo icocekile.
- Nceda uthule xa ungena naxa uphuma kumnyango omkhulu
nakwipaseji Nceda uthule emnyango nakwipaseji.
• Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
Asikho isilwanyana sasekhaya esivumelekileyo.
• Izinto ezingekho mthethweni ezifana nokuthengisa ngomzimba nokuthengisa iziyobisi azivumelekanga tu kule ndlu.
Akuvumelekanga ukuba kubekho izenzo ezingekho mthethweni ngaphakathi, ngokomzekelo, ukuthengisa ngomzimba nokuthengisa iziyobisi.
• Ukusela utywala, ukutshaya, ingxolo enkulu, ukungcakaza, iipati, iziyobisi, okanye ukonakala konke akuvumelekanga egumbini.
Asivumeli ukusela utywala, ukutshaya, ukungcakaza, ukubamba ipati, iziyobisi, okanye ukutshayisa igumbi, njl.
• Nceda ungaphuli nantoni na egumbini. Ukuba sifumana nawuphi na umonakalo okanye ilahleko xa ubuya, uza kubhataliswa ngokwexabiso lokuqala.
Nceda ungonakalisi, ususe, ulahleke okanye utshintshe indlela eyiyo ifenitshala emagumbini .
Imbuyekezo yeendleko zomonakalo iya kubangwa ngawo wonke umonakalo owenziwe ngabom okanye olahlekileyo.
* Abahambi abangaphantsi kweminyaka eyi-20 abavumelekanga ukuhlala bodwa ngaphandle komntu omnyamekelayo kolu hambo lwezoshishino.
➔Ukuba ungumthengi ohlalayo, asiziboneleli ngeenkonzo zokucoca okanye izinto zokucoca. Ukuba uyazidinga, nceda usazise kwangaphambili kwaye imali yokucoca iza kuba yi- $ 300.
➔Ukuba intlama yokuhlamba amazinyo kunye nephepha langasese azonelanga ngexesha lokuhlala kwakho, sinekhabhathi ongayisebenzisiyo ecaleni kwendawo yokufaka amanzi kwindawo yokwamkela iindwendwe, yithathe ngokwakho
➔Itafile yokwamkela iindwendwe kwindawo yokwamkela iindwendwe iyafumaneka ukuze ikwenzele lula, nceda uyigcine icocekile emva kokutya, uthathe inkunkuma uyise kwilifti yokhuseleko, uze ulungise inkunkuma
4.88 · Izimvo eziyi-60
Umbuki zindwendwe ngu- Music
Inombolo yegumbi esikulungiselele yona iza kuthunyelwa kwidilesi yakho ye-imeyile kusuku olungaphambi kokuba ubhalise xa ufika, nceda uqaphele i-imeyile
Ukuba awuyifumani ileta ngaphambi kokungena, nceda usithumelele i-imeyile uze ubuze kumntu ofundisa ngeintanethi☎ u-0907-096-188
Ukuba awuyifumani ilet…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Xinxing District